कोपा अमेरिका: सेमिफाइनल समीकरण पूरा, को-को भिड्दै? – hamrosandesh.com
कोपा अमेरिका: सेमिफाइनल समीकरण पूरा, को-को भिड्दै?
जारी कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ । क्वाटरफाइनल अन्तर्गत आइतबार बिहान अर्जेन्टिना र इक्वेडरबीचको खेल सकिएसँगै अन्तिम चारमा पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको हो ।
यस संकरणमा साविक विजेता ब्राजिल, अर्जेन्टिना, कोलम्बिया र पेरुले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् । अब सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनाले कोलम्बियासँग खेल्नेछ भने ब्राजिलले पेरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सेमिफाइनल तालिका :
मंगलबार बिहान ४:४५ बजे – ब्राजिलविरुद्ध पेरु
बुधबार बिहान ६:४५ बजे – अर्जेन्टिनाविरुद्ध कोलम्बिया
अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । आइतबार बिहान भएको क्वार्टरफाइनलमा इक्वेडरलाई ३–० गोलले हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको हो ।
अर्जेन्टिनालाई जिताउन रोड्रिगो, मार्टिनेज र मेस्सीले गोल गरे । पहिलो हाफको ४० औँ मिनेटमा गोल गर्दै रोड्रिगोले टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । मार्टिनेजले दोस्रो हाफको ८४ औँ मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
खेलको अन्त्यतिर कप्तान मेस्सीले डिबक्स नजिकबाट उत्कृष्ट फ्रिकिक गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई सेमिफाइनल पुर्याएका हुन् । जारी कोपा अमेरिकामा मेस्सीको यो चौथो गोल हो । उनले चार गोलका लागि असिस्ट समेत गरेका छन् ।
इंग्ल्याण्ड युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । युक्रेनविरुद्ध सहज जित निकाल्दै उसले सेमिफाइनलको यात्रा सुरु गरेको हो ।
भर्खरै सम्पन्न खेलमा इंग्ल्याण्डले युक्रेनविरुद्ध ४–० को शानदार जित दर्ता गरायो । इंग्ल्याण्डलाई सहज जित दिलाउन कप्तान ह्यारी क्यानले दुई गोल गरे ।
इटालीमा भएको खेलमा इंग्ल्याण्डले सुरुवातमै अग्रता लिएको थियो । कप्तान केनले चौथो मिनेटमै गोल गर्दै इंग्ल्याडलाई अग्रता दिलाए । उनले रहिम स्टर्लिङको पासलाई सदुपयोग गर्दै गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफमा युक्रेनले केही आक्रमण बुनेको थियो तर गोल गर्न भने सकेन । दोस्रो हाफको सुरुवातमै इंग्ल्याण्डले पुनः आक्रामक खेल सुरु गर्यो । यसको परिणामतः ४६ औं मिनेटमै ह्यारी मग्वायरले गोल गर्दै टोलीलाई २ ० को अग्रता दिलाए ।
पुनः कप्तान केनले गोल गर्दै आफ्नो टोलीलाई ३ ० को स्थितिमा पुर्याए । त्यस्तै, सफ्टिच्युट खेलाडीको रुपमा मैदानमा प्रवेश गरेका जोर्डन हेन्डरसनले ६३ औँ मिनेटमा गोल चौथो गोल गरे ।